I am not humble nditori mbinga ine noise says Mutarisi - Zimcelebs Official
FEATURED I am not humble nditori mbinga ine noise says Mutarisi
Tinashe Mutarisi is well known for his work off media and how he intends to keep a low profile of most of his private life.
In a social media update he had this to say:
But on a more serious note ka paya pa munoti ndiri humble ndotoshaya kuti munenge muchinyatsoda kuti chii honestly.
Inini ndotoona kunge ndiri rude coz ndinoita zvandirikuda panguva yandirikuda.Saka kana ndiriku chitungwiza pachikwanha ne boys ndinonyatsonzwa kuti yaaa ndine vekwangu. Mukandiisa kuma dale dale uko mmmm mandiomesera.
Mukazondiona ndiri pa dinner ndakapfeka tuxedo mobva maziva kuti Nash ava humble koz ndeendaakuda kufadza vamwe but kana mukaona ndiina @fantan_chillspot tichitenderera mumbare ndirikungoita zvandooda.
Asi akandipa zita rekuti mbinga isina noise ndikamuziva ndichamupa one iPhone pa 100 dzeku @nashpaints dziya. Ndigadzirireiwoka logo yacho mbinga isina noise
Inspirational message from Mudiwa hood to focused youths